Ukulahla isivumelwano seNyukliya neIran kuya kuyichaphazela njani imarike yemasheya? | Ezezimali
Ukulahla isivumelwano se nyukliya kunye neIran kuya kuyichaphazela njani imarike yemasheya?
Iimarike zesitokhwe zaseYurophu zizama ukufezekisa isigqibo se-United States sokushiya isivumelwano seenyukliya ne-Iran. Apho kwezona mpembelelo zichanekileyo ezibangelwe yile milinganiselo kucacile Ixabiso leoyile libuyile. Ngelixa ifuthe kwiimarike ze-equity lisikelwe umda, ubuncinci okomzuzwana kude kube kungqinisisa ukuba yeyiphi eyona meko ivulekileyo kule meko intsha. Apho ii-indices eziphambili zaseYurophu ziye zahlala kumanqanaba afanayo kwiiveki ezidlulileyo.
Ewe, kwakukho uloyiko phakathi kwabatyali mali ukuba ukuthengisa kuya kubakho ngokucacileyo ekuthengeni. Ewe, ngokubhekisele kwisalathiso esikhethiweyo semakethi yespanish yaseSpain, i-Ibex 35, akubangakho nakuphi na ukwahluka kokungangqinelani kwezi ntsuku. Ukufikelela kwinqanaba lokuba wakwazi ukunyamezela inqanaba elibalulekileyo lamanqaku ayi-10.200. Kwinto etolikwa njengento eyayilindelwe ziimarike zezemali. Ngayiphi na imeko, eyona ngozi iphambili yile yokuba umba we-Iran uye waba yinto ethabathekisayo kumongameli wase-United States, uDonald Trump.
Emva kwempendulo evela kwiingxowa ezinobuncwane, ukungaqiniseki okuphambili kusekwe kwinto ezinokwenziwa ziingxowa kwiiveki ezimbalwa ezizayo. Kuxa kulapho kukho ingozi ngakumbi kwii-indices phantse zomntu wonke zokuwa kwixabiso labo. Kuxhomekeke ekukhuseleni okunokuthatha lo msitho wamanye amazwe. Akukho meko apho kungagwetywa ngaphandle ukuba iimalike zinokuthi zihanjiswe ngu ukuthengisa umlambo elehlisa ixabiso lezabelo ezidweliswe kwiimarike zezemali.
1 Ioyile ithengisa kwindawo ephezulu
2 Ungasisebenzisa njani isaphulelo?
3 Iziphumo kwimarike yaseSpain
4 IArgentina: ingxaki entsha yemali
5 Iingcebiso zokurhweba kwimarike yemasheya
Ioyile ithengisa kwindawo ephezulu
Enye into eyahlukileyo kakhulu yile yenzekayo ngexabiso legolide elimnyama okoko iqale ukunyuka okuphezulu okungaziwa ngokuqinisekileyo ukuba ingahamba iye phi. Okomzuzu sele igqithile kwinqanaba elibalulekileyo le $ 75 umphanda. Eli linqanaba lamaxabiso elingazange libonwe iminyaka emininzi kwaye enika izizathu ezintsha kubatyali mali abancinci nabaphakathi ukuba bazibeke kwicandelo leoyile kwiinyanga ezizayo. Ayothusi into yokuba le asethi yemali inokubakho okuphezulu kakhulu kwaye inokunceda ukwenza ukonga kunenzuzo ngokukuko kunakwenye imveliso yezemali.
Kwelinye icala, ayinakulityalwa ukuba isaphulelo esiveliswe yioyile kwiimarike zezemali phantse iipesenti ezisi-4. Ukuza kuthi ga kwinqanaba lokuba abahlalutyi beemarike baqikelele ukuba esi sigqibo sikamongameli wase-United States siza kukhokelela ekwehleni kokuthumela ngaphandle e-Iran phakathi kwe-200.000 kunye ne-1 yezigidi zemiphanda ngemini xa kuthelekiswa nemveliso yangoku. Akukho kunqongophala kwamazwi aqikelela ukuba ixabiso lale asethi yemali linokufikelela kwinqanaba leedola ezingama-90 kwixesha elingelolide kakhulu.
Ungasisebenzisa njani isaphulelo?
Elinye lamanyathelo asebenzise eli thuba litsha lichaphazela izinto ezingavunyelwanga yinkampani yeoyile iRepsol. Akunakuba kuncinci xa yenye yeenkampani ezixhamla kakhulu koku Ukwanda kwempixano kuMbindi Mpuma njengesiphumo sesigqibo sikaDonald Trump. Ukongeza, kufanele ukuba kukhunjulwe ukuba izabelo zabo besele zine-rally ye-bullish iminyaka eliqela kwaye bakhokelele amaxabiso abo kumanqanaba ee-euro ezingama-18 ngesabelo ngasinye. Nokuba yeyiphi na, yenye yexabiso ekufuneka ithathelwe ingqalelo ukusukela ngoku.
Elinye icebo elifanelekileyo onokulithatha ukusukela ngoku ukuya phambili yiya kwingxowa-mali ethengiswayo esekwe kule asethi ebalulekileyo yemali. Zininzi ii-ETFs ezidibana nolu phawu lukhethekileyo, nangona kunjalo awuzukukhetha ukunyuka kwexabiso legolide emnyama ngayo yonke intiyo. Ngokubuyisa, uya kuba nethuba elibonakalayo lokuba uya kukhuselwa ngakumbi kwimeko ezingafunekiyo kwiimarike zezemali. Ngale ndlela, kufanele ukuba kukhunjulwe ukuba ii-ETFs ziyindibaniselwano yeemali zotyalo-mali kunye nokuthengwa kunye nokuthengiswa kwezabelo kwimarike yemasheya. Nangona kukho iikhomishini ezikhuphisana ngakumbi kunezi mveliso zimbini zemali.
Iziphumo kwimarike yaseSpain
Enye into eyahlukileyo kakhulu yinto eyakwenzeka kwizabelo ukuba le ithoni yokungaqiniseki igcinwa kwiimarike zeoyile. Kungenxa yokuba kunjalo, ngaphandle kwamathandabuzo ukuba imarike yesitokhwe kuzwelonke iya kusokola kwaye mhlawumbi ininzi nakwintsalela yonyaka. Ngokuwa okubonakalayo kwiinkampani ezidweliswe kwiimarike zesizwe. Ewe kunjalo, yimeko onokuyibona ngokugqibeleleyo kwaye kufuneka ubone kwangaphambili ukusukela ngoku. Ukungenisa zonke iindlela zokukhusela nika ukhuseleko ngakumbi kwimali yakho kumaxesha anzima ngenene kuyo nayiphi na iprofayili yotyalomali. Nangona amathuba oshishino lokwenyani aya kulandela ngokuqinisekileyo.
Ngayiphi na imeko, le micimbi inokusebenza njengesizathu soku Phinda uthumele ipotifoliyo yakho yotyalo-mali sijonge phambili kule minyaka imbalwa izayo. Ngale ndlela, lelinye ithuba elinikezelwa ziimarike zezemali ukuze uqhubeke nokwenza inzuzo eyongelayo ukusukela ngoku. Ngaphandle kolunye uthotho lobuchwephesha kwaye mhlawumbi nokuthathela ingqalelo okusisiseko. Nokuba yeyiphi na indlela, ukunyuka kwegolide emnyama ayizondaba zimnandi kwiimalike zokulingana. Ukuba akunjalo, ngokuchaseneyo, kunokudala ukuthandabuza ngakumbi kunangoku. Ukufikelela kwinqanaba lokuba ufanele ulumke ngakumbi kutyalo-mali lwakho. Kuba ii-euro ezininzi zisemngciphekweni.
IArgentina: ingxaki entsha yemali
Nangona kunjalo, ingxaki eveliswe eArgentina inokuba neziphumo ezibi kakhulu kwimarike yemasheya kwaye ngakumbi kwiSpanish. Ayothusi into yokuba urhulumente waseMacri acele ungenelelo lweNgxowa-mali yeHlabathi yezeMali (i-IMF), inikwe ingxaki yemali elijongene nayo ilizwe laseMelika. Kule meko, kufuneka sibone ubukho obuqinileyo beenkampani zaseSpain ezidweliswe kwi-Ibex 35 ekhoyo eArgentina. Ukuba baya kuchaphazeleka kakhulu kwaye abo kuya kufuneka bangasebenzi kwimarike yezabelo. Ezinye zezona zibalulekileyo zezi I-BBVA, iSantander okanye iTelefonica.
Kuyabonakala ukuba imarike yasespain yaseSpain iya kuba yenye yezona zinto zithambekele ekuphuhliseni ukwehla okuqhubekayo ngenxa yemeko kweli lizwe laseSpain nelaseMelika. Ewe, ngale ndlela akukho khetho ngaphandle kokulumka kwaye ulinde ukuba iziganeko ziguquka njani kwezona ntengiso zibalulekileyo zisakhulayo emhlabeni. Kungenxa yokuba indlela yokuziphatha kwezabelo zaseSpain inokuba mbi ngakumbi kunakwezinye iindawo ezinokubaluleka okukhethekileyo kwilizwekazi elidala. Kuya kuba luncedo ukukhetha ukuvula izikhundla kwi I-Eurostoxx 50 ekonakaleni kwe-Ibex 35, ukwenza ukugcinwa kwethu kunenzuzo kunye neziqinisekiso ezinkulu zokuphumelela.
Iingcebiso zokurhweba kwimarike yemasheya
Ukujongana nale meko intsha yoqoqosho lwamanye amazwe, enye yezona zinto zibalaseleyo onokuzenza ukusukela ngoku kukungenisa elizweni uthotho lwezikhokelo ezinokuthi zibe luncedo kakhulu ekuphuhliseni nasiphi na isicwangciso sotyalo-mali. Apho ukhuseleko kufuneka lube ngaphezulu kwezinye izinto. Yinto yokuba inzuzo onokuyifumana ukusukela ngoku uyeke kakhulu kunangoku. Ukusuka kwezi ngcebiso zilandelayo.
Eli asiloxesha lika qala imisebenzi emitsha kwimarike yemasheya yaseSpain. Ukuba akunjalo, ngokuchaseneyo, kuyacetyiswa ngakumbi ukuba ulinde ixesha elithile ukuze ubone ukuba yeyiphi impembelelo kwezi zihloko zishushu zanamhlanje.
Kukho uchungechunge lwe iimpahla zezimali oko kunokuba luncedo kakhulu kwezi meko zangoku apho iimarike zezemali zihlala khona. Enye yazo yioyile, kodwa zikhona ezinye ezingalindelwanga eziza kwenza ukuba ukonga kunenzuzo ngakumbi.
Lo ngumzuzwana ekufuneka uthathe ithuba lokutshintsha ipotifoliyo yakho yotyalo-mali. Ithuba lokubandakanya iiasethi ezintsha zemali. Ukutshintsha abanye ukuba sele benokunikezela ngenzuzo encinci kakhulu okanye sebephelelwe lixesha. Lithuba lokutshintsha nasiphi na isicwangciso-mali.
Awunakulibala ukuba ezi ntshukumo kwiimarike zezemali ezithi zinokuba zezokwexeshana. Ukuya kwinqanaba lokuba imeko ibuyele endaweni yematshisi emva kweeveki ezimbalwa okanye iinyanga zoxinzelelo olucacileyo.
Alithandabuzeki elokuba kuya kufuneka ukhethe ii-asethi eziyimali ezintywiliselwe kwi indlela yokucacisa ngokucacileyo. Kwaye ke oko kunokubaluleka kokuphononongwa okubaluleke ngakumbi kunakwamanye amaxesha. Ubuncinci kwixesha eliphakathi nelide, nokuba kuya kufuneka ulinde ixesha elide ukufumana ibhaso olifunayo.
Ukusuka kule meko, awufanelanga ukuba nomsindo ngakumbi kwiindlela zakho zotyalo-mali. Phakathi kwezinye izizathu kuba unako kukushiyele ii-euro ezininzi kwiimarike zezemali. Kukhethwa ngeli xesha ukubuyela kwiipateni zokuzikhusela ngakumbi, nangona ekugqibeleni umdla unomdla kakhulu. Yingxoxo yeklasikhi yokhetho phakathi kokhuseleko okanye inzuzo kwaye kuya kufuneka ukhethe enye yeemodeli ezimbini.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Ukulahla isivumelwano se nyukliya kunye neIran kuya kuyichaphazela njani imarike yemasheya?
Wazi ntoni ngeFibonacci?